दाँतको समस्याहरुबाट कसरी जोगिने: डा. नियुक्ति अर्जेल - Mero Tribune
Home ON POINT दाँतको समस्याहरुबाट कसरी जोगिने: डा. नियुक्ति अर्जेल
दाँतको समस्याहरुबाट कसरी जोगिने: डा. नियुक्ति अर्जेल
मानिसको अन्य स्वस्थ जस्तै दाँतको स्वस्थ पनि महत्पवूर्ण छ । दाँतको मुख्य काम खानेकुरा चपाउने हो । यसर्थ दाँतको सम्बन्ध सम्पूर्ण शारीरीक स्वस्थसँग सम्बन्धित हुन्छ । दाँतमात्र बलियो भएर हुँदैन, दाँतको जरा जुन हाडभित्र हुन्छ, त्यो पनि बलियो हुनु आवश्यक पर्दछ, त्यसका लागी दाँत र गिजा दुवै सफा हुनुपर्दछ ।
मुखलाई सफा र स्वच्छ राख्यो भने स्वस्थ्य पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले दाँत जीब्रो र गिजालाई सफा र स्वस्थ राख्न आवश्यक छ । दाँतमा लाग्ने रोग दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा दाँतमा किरा लाग्ने अर्को गिजामा समस्या आउने गिजा रोग विशेषज्ञ डा. नियुक्ति अर्जेल बताउँछिन् ।
दाँतमा कस्तो कस्तो समस्याहरु देखिन्छन् र त्यस्ता समस्याहरुबाट बच्न के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा डा. अर्जेलको सुझाव यस्तो छ :
दाँत कसरी बिग्रन्छ
हामीले खाएको खानेकुरा दाँतको वरिपरि टासिन्छ, दाँत राम्रोसँग सफा गरिएन भने दिनदिनै खानेकुरा टासिँदै जान्छ । दाँतमा जम्मा भएको खानेकुरा मुखमा भएका हजारौं किटाणुका कारण एसिड बन्छ । त्यही एसिडले दाँत बिगार्न थाल्छ । त्यसैलाई बोलीचालीको भाषामा किरा लागेको भनिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा रेडिमेड खानेकुराहरू जतिबेला पनि खाने चलन छ । यसले पनि दाँतलाई असर पुगेको छ । विशेषगरी कुरकुरे, चक्लेट, चाउचाउ, टाँसिने चकलेट, लेज, चिप्स, फ्यान्टाजस्ता रेडिमेड चिजहरू खाने चलन बढ्दै गएको छ । धेरैले यस्ता खाने कुरालाई सजिलो खाजाका रूपमा लिने गरेका छन् । यस्ता खानेकुराहरू खाएपछि दाँत नमाझिकन या कुल्ला नगरी छोड्ने चलन छ । यस्तो बानीले गर्दा दाँत किराले खाने रोग बढेको छ । गुलिया खानेकुरामा चिनी हुन्छ । त्यो दाँतमा जम्मा भएपछि व्याक्टेरिया निस्कन्छ र दाँत किराले खान्छ । त्यस्ता खानेकुरा टाँसिइरहेपछि एसिड निकाल्छ र त्यही वृद्धि भएर दाँत किराले खान्छ।
दाँत किराले खाँदा स्वास्थ्यमा पर्ने असर कस्ता छन्
नेपालमा मुख स्वास्थ्यलाई उल्लेख्य रुपमा महत्व दिइएको पाइँदैन, दाँतको नियमित जाँच पनि गराइदैँन । यसकारण यो क्षेत्रमा दाँत स्वास्थ्यको समस्या बढी हुने गरेको छ । बैज्ञानिक अध्ययनहरुले पनि मुखको समस्या र अन्य मुटो रोग, हाड जोर्नी समस्या र मधुमेहजस्ता रोगहरु सम्बन्धित हुने देखाएको छ ।
– उचित बानी व्यवहार, खानपानलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी सकारात्मक कुरा अपनाएर कीरा लाग्ने समस्या घटाउन सकिन्छ ।
– राति सुत्नुअघि र बिहान खाजा, खाना खाएपछि दुईपटक दाँत माझ्नुपर्छ । खाना खाएपछि मुख पानीले कुल्ला गर्नु पनि मुख स्वास्थ्यको लागि राम्रो उपाय हो ।
– दाँतमा अड्किएका खानाका कण कुल्ला गर्दा पखालिएर बाहिर निस्किन्छन् । खाद्यकण दाँतमा नरहँदा दाँतमा किरा लाग्नुका साथै मुख गन्हाउने समस्या समेत हुँदैन ।
– नरम ब्रसमा फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट हालेर दाँत माझ्नु राम्रो हुन्छ ।
– नियमित रूपमा वर्षको दुईपटक दन्त चिकित्सककहाँ दाँत जचाउन जानुपर्छ ।
दाँतको अर्को रोग भनेको गिजाको रोग हो । गिजाले दाँतलाई समातेर बसेको हुन्छ । दाँत सफा गरिएन भने गिजामा असर गर्छ । दाँतको भागमा लेउजस्तो जमेको हुन्छ । यसलाई निकाल्न प्रत्येक दिनमा दुई पटक खाना खाएपछि ब्रस गर्नुपर्छ । सफाइ नगरे गिजा र हड्डीलाई असर गर्छ । यसले गिजा सुन्निने, रगत आउने, सास गन्हाउने हुन्छ । अझै लापरबाही गर्दै गयो भने किटाणु जम्दै जान्छन् अनि दाँत पनि हल्लिन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा या त ठुलै अपरेशन गर्नुपर्छ वा दाँत निकाल्नुपर्छ ।
दाँतको धेरै रोगहरू उपचार गर्न सकिने र रोक्न सकिने हुन्छ । दाँत उमेर पुगेपछि झर्छ भन्ने छैन सुरूदेखि उपचार गर्यो भने दाँतले दुःख दिँदैन । यसका लागि दिनको दुईपटक ब्रस गर्नुपर्छ ।
गिजाको सामस्या हुनबाट बचे उपाय
– जिब्री वा ब्रसको पछाडिको भागले बिस्तारै नियमित रुपमा जिब्रोको सफा गर्नुपर्दछ ।
– खानेकुराहरुमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । दाँतमा टाँसिने वा गुलिया खानेकुराहरु एकदमै कम मात्रामा खानुपर्दछ ।
– चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम माउथवास तथा डिसेन्सिटाइजिङ पेस्टहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
– शरीरमा मधुमेहजस्तो किसिमका रोगहरु छ भने गिजासम्बन्धि समस्याहरु आउन नदिन विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
– गिजा स्वस्थ राख्नको निम्ति भिटामिन सियुक्त फलफुलहरुको नियमित सेवन गर्नुपर्दछ ।
– कम्तिमा पनि वर्षको दुईपटक ६–६ महिनाको फरकमा दन्तचिकित्सक वा विशेषज्ञ चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुको साथसाथै दाँत सफा गराउनुपर्दछ ।
Sumitra isaSenior Correspondent for Tribune.
बलिउड सेलिब्रेटीहरु जसले पालेका छन् महंगा घरपालुवा जनावर
निरन्तर समाज सेवामा समर्पित निता राउत
Previous articleBe ready for epic adventure in Nepal
Next articleउफ! फेरि बढ्यो पेट्रोलको मूल्य